Ny ravin-tsolika PP ho an'ny protec amin'ny gorodona sy ny fiarovana amin'ny fanamboarana dia azo atao habe sy horonana namboarina, mazàna ny hateviny dia 2-7mm matevina, araka ny fangatahana samihafa, azo atao fiarovana ultra-violet, anti-static, conductive, retardant flame, fanao loko, mpanohitra manimba harafesina nanao ny takelaka hollow pp manokana.
Pp hollow sheet dia polypropylene (PP) ho akora fototra aorinan'ny fantsom-panafody fantsom-panafody noho ny fanodinana ny akora sy ny famokarana, ny famoahana aotra ny fizotran'ny famokarana dia mahatonga azy io ho fitaovana fiarovana tontolo iainana vaovao izay ekena manerantany, ary Izy io dia azo ampiasaina amin'ny takelaka hazo, baoritra ary takelaka metaly amin'ny sehatra maro Fanoloana fitaovana.
Pc mitafo fanitso dia be mpampiasa amin'ny indostria maro, ny sosona pad samy hafa habe pp ravina ravina ho an'ny vokatra misaraka ho fonosana boaty, pallets sy ny hafa fonosana. Ny sosona pad dia pp ravina voakolokolo mifanaraka amin'ny vokatra samihafa, ny fonosana samihafa dia mamokatra habe sy endrika namboarina ho an'ny misaraka ary miaro ny vokatra amin'ny famonosana sy ny fandefasana. Ampiasaina be amin'ny fampiasana tavoahangy sy fandefasana tavoahangy, fitehirizana, fitehirizana trano fitehirizana, vokatra misaraka, fitahirizana kapoaka, fandefasana kapoaka ary ny hafa fonosana kapoaka fitoerany.
Pp mitaona tavoahangy mitafo fonosana dia ravina mihantona pp arakaraka ny fangatahana samihafa natao habe, lanja, GSM ary endrika ho an'ny fitehirizana tavoahangy sy fandefasana, tsara ho an'ny vokatra tavoahangy misaraka amin'ny sosona maro amin'ny paleta, io no sosona tsara indrindra hiarovana ny tavoahangy ao fonosana sy fandefasana. Ampiasaina matetika amin'ny labiera, labiera, divay, indostrian'ny tavoahangy, vokatra ara-tsakafo, vokatra vita amin'ny kapoaka sy ny hafa fonosana, fandefasana, fitehirizana, trano fitobiana, fampidirana entana, fanondranana ho fiarovana manokana ireo vokatra.